အ ဆိုတော်အစ္စဏီ ကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက် ရ တဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်း ကို ပြောပြလာ တဲ့ တာမွေမြို့နယ် တရားသူကြီး – Shwewiki.com
အ ဆိုတော်အစ္စဏီ ကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက် ရ တဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်း ကို ပြောပြလာ တဲ့ တာမွေမြို့နယ် တရားသူကြီး
အဆိုတော် အစ္စဏီနဲ့ စူးရှထက်တို့အမှုကို ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း သိကြမှာပါ…. ၂၀၁၈ ခုနှစ်တည်းက တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ အဆိုပါအမှုဟာ ၁ နှစ်ခွဲကျော်အကြာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်နေ့က ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်….. အဓမ္မကျင့် နှိပ်စက်မှုနဲ့ တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ တရားလို စူးရှထက်က ကျေအေးပေးခဲ့ပေမဲ့ ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါ…
ဒီလို ၇ နှစ်ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက် အစ္စဏီအတွက် ပရိသတ်တွေက စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပြီး ပြစ်ဒဏ်အပေါ်မှာလည်း ဝေဖန်မှုတွေ ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်…ကျေအေးပေးပေမဲ့ ဒီလို ထောင် ၇ နှစ်ချမှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ တာမွေတရားရုံးက ပြန်ကြားရေးအရာရှိက ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပါတယ်…
ဒါကတော့ ခုလိုကျေအေးပေးပေမဲ့ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၉၄ အရ လွှတ်ပေးလို့မရဘဲ လူငယ်တွေ အတုယူမမှားအောင် စံနမူနာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်…ခုလို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာကလည်း လက်စားချေတဲ့ သဘောမဟုတ်ဘဲ သင့်တော်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကို လူငယ်တွေအတုခိုးမမှားအောင် ချမှတ်တာလို့ သိရပါတယ်… ဒီပြစ်ဒဏ်ဟာလည်း လျှော့ထားတာဖြစ်ပြီး ပုဒ်မ ၃၂၄ ဆိုရင် ပြစ်ဒဏ် ၃ နှစ်အထိ..ပုဒ်မ ၃၂၃ ဆိုရင် ၁ နှစ်အထိ …. ပုဒ်မ ၃၇၆ ကတော့ ၁၀ နှစ်အထိ ချလို့ရပေမယ့် ပြစ်ဒဏ်အားလုံးပေါင်းကို ၇ နှစ်ချပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ထားတာပါ” လို့ အဆိုပါအရာရှိက ဆိုခဲ့တာပါ….
ခုလိုချမှတ်ခံရတဲ့ အစ္စဏီအနေနဲ့လည်း အယူခံဝင်နိုင်တယ်လို့ သိရပြီး လက်ရှိမှာတော့ အစ္စဏီ့ပရိသတ်တွေကလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးနေကြပါတယ်…
အ ဆိုတျောအစ်စဏီ ကို ထောငျဒဏျခမြှတျလိုကျ ရ တဲ့ အဓိကအကွောငျးအရငျး ကို ပွောပွလာ တဲ့ တာမှမွေို့နယျ တရားသူကွီး
အဆိုတျော အစ်စဏီနဲ့ စူးရှထကျတို့အမှုကို ပရိသတျကွီးတို့လညျး သိကွမှာပါ…. ၂၀၁၈ ခုနှဈတညျးက တရားရငျဆိုငျခဲ့ရတဲ့ အဆိုပါအမှုဟာ ၁ နှဈခှဲကြျောအကွာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဇနျနဝါရီလ ၇ ရကျနကေ့ ပွဈဒဏျခမြှတျလိုကျပွီ ဖွဈပါတယျ….. အဓမ်မကငျြ့ နှိပျစကျမှုနဲ့ တရားရငျဆိုငျခဲ့ရတာဖွဈပွီးတော့ တရားလို စူးရှထကျက ကအြေေးပေးခဲ့ပမေဲ့ ထောငျဒဏျ ၇ နှဈခမြှတျခံခဲ့ရတာပါ…
ဒီလို ၇ နှဈခမြှတျခံလိုကျရတဲ့အတှကျ အစ်စဏီအတှကျ ပရိသတျတှကေ စိတျမကောငျးဖွဈနကွေပွီး ပွဈဒဏျအပျေါမှာလညျး ဝဖေနျမှုတှေ ရှိနတောဖွဈပါတယျ…ကအြေေးပေးပမေဲ့ ဒီလို ထောငျ ၇ နှဈခမြှတျလိုကျတဲ့အကွောငျးကိုတော့ တာမှတေရားရုံးက ပွနျကွားရေးအရာရှိက ဖှငျ့ဟပွောဆိုခဲ့ပါတယျ…
ဒါကတော့ ခုလိုကအြေေးပေးပမေဲ့ ရာဇဝတျကငျြ့ထုံးဥပဒေ ပုဒျမ ၄၉၄ အရ လှတျပေးလို့မရဘဲ လူငယျတှေ အတုယူမမှားအောငျ စံနမူနာအဖွဈဆောငျရှကျခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယျ…ခုလို ပွဈဒဏျခမြှတျတာကလညျး လကျစားခတြေဲ့ သဘောမဟုတျဘဲ သငျ့တျောတဲ့ပွဈဒဏျကို လူငယျတှအေတုခိုးမမှားအောငျ ခမြှတျတာလို့ သိရပါတယျ… ဒီပွဈဒဏျဟာလညျး လြှော့ထားတာဖွဈပွီး ပုဒျမ ၃၂၄ ဆိုရငျ ပွဈဒဏျ ၃ နှဈအထိ..ပုဒျမ ၃၂၃ ဆိုရငျ ၁ နှဈအထိ …. ပုဒျမ ၃၇၆ ကတော့ ၁၀ နှဈအထိ ခလြို့ရပမေယျ့ ပွဈဒဏျအားလုံးပေါငျးကို ၇ နှဈခပြွီးတော့ ဆောငျရှကျထားတာပါ” လို့ အဆိုပါအရာရှိက ဆိုခဲ့တာပါ….
ခုလိုခမြှတျခံရတဲ့ အစ်စဏီအနနေဲ့လညျး အယူခံဝငျနိုငျတယျလို့ သိရပွီး လကျရှိမှာတော့ အစ်စဏီ့ပရိသတျတှကေလညျး စိတျမကောငျးဖွဈပွီး အဆငျပွပေါစလေို့ ဆုတောငျးပေးနကွေပါတယျ…
လူရှ ငျတျော အဖှဲ့ ရဲ့ တာဝနျပကျြကှကျမှုတှကေို ဖှငျ့ခလြိုကျ တဲ့ လူရှငျတျော ဦးကောငျး ကြျော
. ..ဇာတ်လမ်း တို နဲ့ အဆုံး သတ်သွား တဲ့ အမေရိကန် – အီရန် အကြမ်းအရမ်း ဇာတ်…